မိမိ iPhone,iPad,iPod မှ Credit-card မတောင်းအောင် Free Apple ID ဖွင့်နည်း ~ မောင်သက်ဝေ
မိမိ iPhone,iPad,iPod မှ Credit-card မတောင်းအောင် Free Apple ID ဖွင့်နည်း
Sunday, April 27, 2014 Admin
ပို့စ်ရေးသားသူ – ကိုစည်သူအောင် (Myanmar Mobile Users Group) 1. Setting > iTunes & App Store မှာ Apple ID SignIn ဖြစ်နေပါက Sign Out သေချာစွာပြုလုပ်ပါ ( ပုံ-၁ )
2. App Store ကိုသွားပြီး Search မှာ Free App Name ( Example : spotify ) ဆိုပြီးရိုက်ပါ ပေါ်လာပါက FREE ဆိုတဲ့အပြာရောင်လေးကို နှိပ်ပါ ( ပုံ-၂ )
3.FREE ဆိုတဲ့အပြာရောင်လေး နေရာမှာပြောင်းသွားတဲ့ INSTALL ဆိုပြီးအစိမ်းလေးကိုနှိပ်ပါ ( ပုံ-၃ )
4. စာ ၃ ကြောင်းပေါ်လာမည် ထို ၃ကြောင်းမှ Create New Apple ID ကိုနှိပ်ပါ ( ပုံ-၄ )
5. New Account ဆိုပြီးပေါ်လာပါမည် Store နေရာတွင်မိမိဖွင့်လိုသောနိုင်ငံကိုရွေးပါ (အများစုကတော့United States ကိုပဲရွေးပါသည်) ပြီးလျှင် Next ကိုနှိပ်ပါ ( ပုံ-၅ )
6. Welcome to The iTunes Store ဆိုပြီးပေါ်လာပါမည် Agree ကိုနှိပ်ပါ ( ပုံ-၆ )
7. I have read and agree to the iTunes Store Terms & Conditions (ကျွန်တော် iTunes Store ရဲ့စည်းကမ်းချက်များကိုဖတ်ရှုပြီးသဘောတူညီပါပြီ ) ဆိုတာပေါ်လာလျှင် Agree ကိုနှိပ်ပေးပါ ( ပုံ-၇ )
- Email : ***မိမိလက်ရှိSignInလုပ်ပြီးမေးလ်းစစ်နိုင်သောEmailကိုဖြည့်ပါ***
- Password : စစချင်းအကြီးတစ်လုံးပါရမည် ဥပမာ Fasts456
Verify : Fasts456 (Password မှာရေးခဲ့တဲ့အတိုင်း)
- Security Info
ကျွန်တော်ရွေးသမျှမေးခွန်းနဲ့ အဖြေတွေပါ ကိုယ်ကြိုက်ရာမေးခွန်းရွေးပြီးအဖြေလည်းကြိုက်သလိုဖြေလို့ရပါတယ် ***အဓိကက မေးခွန်းရောအဖြေပါမှတ်မိဖို့အရေးကြီးပါတယ်***
Q 1. What was the first thing you learned to cook?
Ans 1. egg
Q 2. What is your dream job?
Ans 2. engineer
Q3. What was the first name of your first boss ?
Ans3. jackie
- OPTIONAL RESCUE MAIL
တစ်စုံတစ်ခုကြောင့်ဝင်မရဖြစ်နေရင် Apple ကနေ Mail ပို့တဲ့အခါ ဒီမှာဖြည့်ထားတဲ့ နောက်ထပ်Mail ကနေလက်ခံနိုင်အောင်ပါ
- Date Of Birth(မိမိမွေးနေ့)
အမှန်အတိုင်းဖြည့်တော့မှတ်မိတာပေါ့ သူများကိုဖွင့်ပေးမှာဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် သုံးသလို
Jan – 1 – 1990 စသဖြင့်သုံးနိုင်ပါတယ်
အဲဒီအားလုံးဖြည့်ပြီးရင် Next ကိုနှိပ်ပါ ( ပုံ-၈,၉,၁၀ )
9. ဒီအဆင့်ရောက်ရင်အရင်ကကိုယ်တိုင်ဖွင့်ဖူးသူတွေ Credit-card တောင်းနေတာမတွေ့ရပဲ Noneမှာအမှတ်ခြစ်လေးနဲ့တွေ့ပါလိမ့်မယ်
iTunes Card လက်ဝယ်ရှိပြီးထည့်လိုသူတွေကတော့ Code မှာ : iTune Gift Card
First Name : Si Thu
Last Name. : Aung
Address. : 899
Address. : Brooklyn(မဖြည့်လဲရ)
City. : Newyork
State. : NY
Zip. : 10001
Phone 123 2087156
အထက်ပါအတိုင်းအားလုံးဖြည့်ပြီးတစ်ခေါက်စစ်ကြည့်ပါမှန်ပြီဆိုလျှင် Next ကို နှိပ်ပါ
10. Verify Your Account ဆိုပြီးပေါ်လာပါမည် ( 90% ပြီးနေပါပြီ ) Done ကိုနှိပ်ပါ
Mail ထဲကိုဝင်ပြီး iTunes ကပို့ထားတဲ့ Verify link ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ Apple ID အသစ်ဖွင့်ခြင်းအဆင့်များအားလုံးပြီးစီးပြီဖြစ်ပါတယ်။
Credit to – ကိုစည်သူအောင် (Myanmar Mobile Users Group)